“Ma jiro wax maamul ah oo aan kan Puntland ahayn oo ka jira deegaannada bariga fog, sida Caluula iyo Baargaal” Wasiirka beeraha & waraabka ee Puntland Eng. Bariij-kalo. – Radio Daljir
Bereega, 25 Aug – Wasiirka beeraha iyo waraabka Puntland Eng. Maxamuud Xaaji Saalax (Bariij-kalo) ayaa sheegay inuusan deegaannada Baargaal iyo Caluula ka jirin wax maamul ah oo layiraahdo Raas-caseyr, waxaana uu carabka ku adkeeyay in dadka deegaanadaasi ku nool ay yihiin shacab si weyn u taabacsan maamulka Puntalnd.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland Eng. Bariij-kalo ayaa ka warbixiyey shir dhawaanahaan ay degaanno ka mid ah Baargal iyo Caluula kula qateen duubabka dhaqanka ee kasoo jeeda degannadasi, kuwaasoo looga wadahadlayay sidii loo hormarin lahaa deegannadaasi looguna samayn lahaa maamullo waxtar ah.
Wasiirka ayaa sheegay in sidoo kale kulamo kale duwan la qaateen qaybaha kale duwan ee bulshada ku dhaqan deegaannada Baargaal iyo Caluula, iyadoo ay isla meel dhigeen in deegaannadaasi loo sameeyo gole deegaan, isla markaana dawladda Puntland ay usoo jeesato sidii ay wax ugu qaban laheyd dhulka ku teedsan bariga fog, waxaano odoyaashu ku dhaliileen Puntland dayacid iyo wax-qabasho la’aan baahsan.
Md. Bariij-kalo ayaa ballanqaadey in wasaaraddiisu ay mashaariic hormarineed ka fulin doonto deegaanka Bareega oo can ku ah falashada wax-soo-saarka dalagyada beeraha, waxaana uu hadalkiisa raaciyay wasiirku in dawladda Puntland ay gaabis ka tahay dhinaca wax-soo-saarka beeraha.
Socdaalka uu deegaannada bariga fog uu ku tagey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Puntland Eng. Bariij-kalo ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan ay dawladda Puntland ballan-qaaday in deegaannadaasi ay u sameyn doonto golayaal deegaan iyo dadaallo hormarineed.
Xaliimo Sacdiyo C/laahi Cali